Pingus, lalao milay Lemmings hanana fotoana mahafinaritra | Ubunlog
Pingus, lalao milay Lemmings hanana fotoana mahafinaritra
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Pingus isika. Ity dia lalao ankamantatra 2D izay loharano maimaimpoana sy malalaka ho an'ny Gnu / Linux, Windows ary MacOS, izay efa manana taona. Mandritra ny lalao dia mila mitarika vondrona penguin marobe amin'ny alàlan'ny sakana sy loza isan-karazany isika, mitady ny fiarovana azy ireo. Lalao kilalao Lemmings mahazatra io. Izy io dia miaraka amina ambaratonga azo lalaovina vitsivitsy ary koa hamela antsika hamorona ny haavontsika manokana amin'ny alàlan'ny tonian-dahatsoratra namboarina. Navoaka tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana GNU GPL ny lalao.
Pingus dia lalao noforonin'i Ingo Ruhnke ary aingam-panahy avy amin'ny lalao malaza Lemmings. Ity kinova ity dia manolo ny lemmings amin'ny penguin toa Tux. Ny fivoarany dia nanomboka tamin'ny taona 1998. Ny ambaratonga rehetra dia misy lohahevitra ririnina, filalaovana feno, ary koa ny mozika sy ny feo.
Nanomboka tamin'ny tanjona tsotra Pingus ny famoronana klone Lemmings maimaim-poana. Ny mpamorona azy dia manolotra ny olona rehetra mety ho liana amin'ny zavatra rehetra nampiasainy tamin'ny famoronana ity lalao ity. Nandritra izay taona rehetra izay dia nitombo lavitra noho ny tanjona voalohany ity tetik'asa ity ary lasa mihoatra ny clone fotsiny, nanomboka teo Izy io dia misy sary am-boalohany, tonian-dahatsoratra namboarina, hetsika vaovao, safidy marobe ary endrika hafa. Amin'ny lalao anglisy ihany no misy ilay lalao.
Ity lalao ity dia mifototra amin'ny rafitra ankamantatra. Ny tanjona kendrena dia ny hitarika andiana penguin avy eo am-piandohana amin'ny alàlan'ny andiana sakana mankany amin'ny igloo. Isaky ny ambaratonga dia misy andiana sakana izay tsy maintsy resin'ny penguin. Hahita ny lalao amin'ny fomba fijery ny mpilalao, ary tsy hifehezana ny hetsiky ny penguin, fa afaka manome baiko fotsiny toy ny fananganana tetezana, mihady na mitsambikina amin'ny penguin izay nanapahany hevitra. Miankina amin'ny ambaratonga, ny mpilalao dia afaka manome karazana iray na hafa amin'ny baiko, fa hanana isa voafetra amin'izy ireo. Rehefa tsy manome andraikitra an'ireo penguin ilay mpilalao dia handeha handroso hatrany izy ireo.
Mandritra ny fampivoarana ny lalao, ny mpilalao dia hamakivaky andian-nosy, izay samy hanana iraka izay tsy maintsy vitan'ilay mpilalao mba hahafahany manohy mandroso. Hanomboka ao amin'ny Nosy Mogork ny lalao, ahafahantsika milalao ny tutorial hahafantarana ny fomba filalaovana.
Ny mpilalao dia tsy maintsy mamorona paikady hamonjy penguin betsaka araka izay tratra, na dia indraindray aza dia ilaina ny manao sorona ny sasany.
1 Ampidiro ao amin'ny Ubuntu ny lalao Pingus
Ampidiro ao amin'ny Ubuntu ny lalao Pingus
Pingus no ahitantsika azy misy toy ny fonosana flatpak ho an'ny Ubuntu. Raha mampiasa Ubuntu 20.04 ianao ary mbola tsy manana an'ity haitao ity alefa amin'ny solosainao, dia azonao atao ny manaraka ny torolàlana izay nosoratan'ny mpiara-miasa aminao taloha momba ny fomba alefaso ny fanohanana ny flatpak ao amin'ny Ubuntu 20.04.
Rehefa afaka mametraka fonosana flatpak amin'ny solosainao ianao dia mila fotsiny sokafy ny terminal (Ctrl + Alt + T) ary ampandehano ao anatiny ity baiko fametrahana ity:
Ity baiko ity hametraka ny kinova farany navoaka an'ny lalao amin'ny rafitray ianao. Raha vantany vao vita ny fametrahana dia mila mitady ilay mpandefa amin'ny solosaina fotsiny isika.
Azontsika atao koa ny manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka ny baiko ao aminy:
Azontsika atao ny manala ity lalao ity napetraka ho fonosana flatpak, manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka ny baiko ao aminy:
Na dia mifototra amin'ny hevitra Lemmings aza i Pingus, dia nanondro ny mpamorona azy fa tsy manandrana klone marina izy io. Tao amin'ny lalao dia nampidiriny ny heviny manokana toy ny sarintanin'izao tontolo izao na ny ambaratonga miafina. Ireo dia mety mahazatra amin'ny lalao Super Mario World sy lalao Nintendo hafa.
Mba hahazoana hevitra mazava kokoa momba ny fijery sy ny filalaovan'i Pingus dia tsara kokoa raha andramana, manatona ny tranokalan'ny tetikasa na ny azy tahiry ao amin'ny GitHub.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Pingus, lalao milay Lemmings hanana fotoana mahafinaritra
Ubuntu 18.04 dia mahatratra ny faran'ny tsingerin'ny fiainany, raha tsy mampiasa ilay kinova lehibe ianao
Tonga ny LibreOffice 7.1.3 miaraka amina fanamboarana bibikely sy fanohanan'ny WebAss Assembly voalohany